ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည် - BRAND'S
သင် စိတ်အားထက်သန်တဲ့ အရေးပါသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေသည်ကို BRAND'S® မှ သိပါသည် ။ မိသားစုအတွက်ပေးရတဲ့ အချိန်တွေ၊ သင့်တစ်နေ့တာဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကို ရယူဖို့အတွက် အချိန်နှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်လာပြီပေါ့။ ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်က သင့်ဘ၀အကောင်းဆုံး ရည်တည်နိုင်ရန်နှင့်အမြဲတမ်းအရည် အသွေးတောက်ပဖို့အတွက် ကူညီပေးနေပါတယ် ….
ရှေးနှစ်ပေါင်း 175 နှစ်ကျော်ကတည်းက BRAND'S®ကြက်ပေါင်းရည်ကို ယုံကြည်ခဲ့တာဟာ ဘရင်းရဲ့အရည်အသွေးကောင်း မွန်မှုကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ယနေ့တိုင် ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်ကို စာတမ်းပေါင်3း0 ကျော်မှ သိပ္ပံနည်းပညာဆိုင်ရာ ထောက်ခံမှုပေးထားပါသည်။ BRAND'S® ရဲ့ Brain Research စင်တာမှလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် သိပ္ပံနည်းကျဦးနှောက်သုတေသနလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး အထောက်အပံ့ပေးထားပါသည် ။
ဘာကြောင့် ရွေးချယ်သင့်တာလဲ ?
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးမြင့်ပေးသည်။ အမြဲတမ်းနိုးကြားဖျတ်လတ်စေပြီး အခွင့်အရေးများကို လက်မလွတ်တမ်း ရယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။
သိပ္ပံနည်းကျ ထောက်ခံမှုပေးထားသည်။ အဟာရသတင်းများ
လုံခြုံစိတ်ချမှု နှင့် နည်းပညာ
ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်က ဘာကြောင့် တာရှည်အထားခံတာလဲ။
ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်ရဲ့ပုလင်းတိုင်းအား လေအလုံပိတ်ထားပြီးအပူနဲ့ပေါင်းခံထားပါသည်။ ပြင်ပမှုပိုးမွှားများမ၀င်နိုင်သော
လေအလုံပိတ်စနစ်မပျက်စီးသေးသရွေ့ ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်ဟာ တာရှည်အထားခံသည်။
ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းထားသင့်ပါသလား။
ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်သည် သဘာဝဖြစ်ပြီး တာရှည်အထားခံပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကင်းသော အလုံပိတ်စနစ်နှင့်အပူပေါင်းခံခြင်းစနစ်တို့ကြောင့်လတ်ဆက်မှုအတွက်အာမခံပါသည်။ ပုလင်းအဖုံးဖွင့်လိုက်ပါက လေနှင့်ထိတွေ့ပြီး အခြား အစားအသောက်များကဲ့သို့ ပိုးမွှားများ ၀င်ရောက်လာနိုင်သည် ။ ဘရင်းကြက်ပေါင်းကိုပုလင်းအဖုံးဖွင့်ပြီးချက်ချင်းသောက်သုံးသင့်ပါသည်။ရေခဲသေတ္တာအတွင်းထည့်ထားပါက (သာမန်အပူချိန်၅ဒီဂရီ)၂၄နာရီအတွင်း သောက်သုံးသင့်ပါသည်။ ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည် ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်သည် သဘာဝကျန်းမာရေးအတွက် ဖြည့်စွတ်အာဟာရဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းသော ကြက်များမှ အစာကြေလွယ်သော အရည်ပုံစံထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
သန့်ရှင်းသော ထုတ်လုပ်မှုပုံစံ အဆင့်ဆင့်ဖြင့် အပူချိန်မြင့်စွာ ပေါင်းခံပြီး ပြိုင်ဘက်ကင်းသော အရသာ နှင့် လတ်ဆက်မှုဖြစ်စေရန် အလုံပိတ်စနစ်ကို အသုံးပြုထားသည် ။ အလွယ်တကူ သောက်သုံးနိုင်ပြီး အဆီနှင့်ကိုလက်စရောကင်းသည်။ တာရှည်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။ ရိုးရာ နှစ်ဆင့်ပေါင်းခံခြင်းနှင့် ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည် ဘယ်လိုခြားနားမှုရှိလဲ။
ရိုးရာနှစ်ဆင့်ပေါင်းခံနည်းတွင် ကြက်သားထည့်ရန် အိုးအသေးတစ်လုံးလိုအပ်ပါသည်။ ကြက်သား ထည့်သော အိုးအသေးကိုအလုံပိတ်ရန်လိုပြီး ကြက်သားအိုး(အသေး)သည်လည်း ရေထည့်ထား သော အိုး(အကြီး)ထဲတွင်ရှိနေရပါမည်။ ရေဆူမှတ်အတွင်း တစ်ဆင့်ခံအပူပေးခြင်းဖြင့် ကြက်ပေါင်းရည်ကို ရရှိနိုင်ပါသည် ။ ထိုကဲ့သို့ ပေါင်းခံခြင်းဖြင့် ကြက်ပေါင်းရည်အတွင်း ပါဝင်သောအရည် ပမာဏ၊ မရှိမဖြစ် အာဟာရများ ပါဝင်မှု ၊ သဘာဝအရသာကို သက်ရောက်မှု ရှိစေသည် ။ ထိန်းချုပ်ထားသော အပူချိန်နှင့် ဖိအားသည် အဆီနှင့် ကိုလက်စရော ပါဝင်သော ကြက်ပေါင်းရည်ရရှိစေသည်။ ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ကြက်သားအရသာကို သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်နှင့် ဖိအားအောက်တွင် ပြိုင်ဘက်ကင်းသော ခေတ်မှီစနစ်များ အသုံးပြုထားပြီး ရယူသည် ။ သင်သည် ကြက်ပေါင်းရည် ရရန် အချိန်အကြာကြီး ပေါင်းခံနေရန်မလိုဘဲ အရန်သင့်သောက်သုံးနိုင်ပါသည် ။
ရိုးရာကြက်ပေါင်းရည်နှင့် မတူသည်မှာ အဆီနှင့် ကိုလက်စရော ကင်းစင်ပြီး ကျန်းမာစွာ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကြက်ပေါင်းရည် တစ်ပုလင်းတွင် ကယ်လိုရီ(၄၀)သာပါပြီး ပန်းသီးအသေး တစ်လုံးတွင်ပါသော ကယ်လိုရီပမာဏနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ။ ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်ပုလင်းအတိုင်း တိုက်ရိုက်သောက်သုံးသင့်ပါသည်။ အပူပေး၍သော် လည်းကောင်း အအေးခံ၍သော်လည်းကောင်း သောက်သုံးသင့်ပါသည်။
ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်ကို သောက်သုံးရန် ဘယ်အချိန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သလဲ ? ပုံမှန်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး တက်ကြွလန်းဆန်းကာ အားအင်ရရှိစေပါသည်။ အစားမစားခင်(၁၅)မိနစ်အလိုတွင် သောက်သုံး ပါက ပိုသင့်တော်ပါသည်
ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်ကို ညမအိပ်ခင် သောက်သုံးနိုင်ပါသလား။
ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်သည် ဖြည့်စွတ်အာဟာရဖြစ်ပြီး ကဖင်းဓါတ်မပါဝင်ပါ။ ဆေးနှင့်လည်း မတူပါ ။ ဘရင်းသောက်သုံးခြင်းဖြင့် ပုံမှန်အိပ်ချိန်ကို မထိခိုက်စေပါ။ သောက်သုံးရန်အညွှန်း
ဘရင်းကြက်ပေါင်းရည်ကို သင့်တော်သော အခန်းအပူချိန်တွင် အအေးခံ၍သော်လည်းကောင်း ၊ အပူပေး၍သော်လည်းကောင်း ပုလင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ပုလင်းအဖုံးဖွင့်ပြီးလျှင် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ထည့်၍ (၂၄)နာရီအတွင်း သောက်သုံးသင့်ပါသည်။ လုံခြုံစိတ်ချမှု နှင့် နည်းပညာ
BRAND'S®၏ပုလင်းတိုင်းကို စားသုံးသူထံမပို့ မီ အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုပေါင်း (၃၄၇) ကြိမ် ပြုလုပ်ပါသည်။
BRAND'S®၏ သုံးဆင့်ကာ လုံခြုံရေးအဖုံးသည် ပြင်ပမှပိုးမွှားများမ၀င်စေရန် ကာကွယ်ပေးထားပြီး သဘာဝထွက်ကုန်များအတွက် အထူးသုတေသနပြုတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ကြာရှည်သန့် ရှင်းလတ်ဆတ်နေစေပါသည်။